सारंगी बजाउँदै देश चिनाउँदै श्याम नेपाली
by Krishna KC | Updated: 27 Apr 2019
-सारंगी बजाउँदै देश चिनाउँदै श्याम नेपाली
इमेल इन्टरनेटको कल्पना परैको कुरा हुलाक पनि हुँदैनथ्यो त्यो बेला । रेडियो र टिभी कहाँ हुनु ! हुनेखानेका घरमा भएको रेडियो सबैले सुन्न पाउने कुरै भएन । संसारमा कहाँ के भइरहेछ ? पत्तो पाउनै मुस्किल ।
गाउँमा सारंगी बजाउँदै आउनेहरु खबर पनि बोकेर आउँथे । कहिले सुखका खबर सुनाउँथे । कहिले दुखका खबर सुनाउँथे। गाउँगाउँ चहारेर खबर सुनाउने कर्मबाटै एउटा जाती जीविकोपार्जन गथ्र्याे। यो श्याम नेपालीका बाजेबराजुका पालाको कुरा हो। श्याम नेपाली पनि बाउबाजेकै जसरी सारंगी रेट्छन् । तर श्याम संसार चाहर्छन् । नेपाली मौलिक लोकबाजाको धुनले नेपालको पहिचान फैलाउँछन्, जसरी कुनै बेला गन्धर्व जाति गाउँगाउँ खबर फैलाउँथ्यो ।
संसारको एउटा कुनादेखि अर्काे कुना फन्को मार्न भ्याइसके श्यामले । जहाँ जान्छन्, सारंगीको धुनले लठ्याइदिन्छन् । नेपाल भन्ने देश छ भनेर पनि कहिल्यै नसुकेकाहरुसमेत छक्क पर्छन् । श्यामको छाती गौरवले फुल्छ । अचेल श्याम नेपालीको बसाइ अमेरिकाको बोष्टनमा छ । जहाँबाट उनी कहिले न्युयोर्कका मञ्चहरुमा पुगेका हुन्छन्, कहिले टेक्सास, कहिले नेब्रास्का, कहिले पेन्सलभानिया । अमेरिकाका दर्जनौं राज्यहरुमा सारंगी धुन गुन्जाइसकेर सीमापारि क्यानडाको टोरन्टो पुगेका हुन्छन् त कहिले युरोपतिर ।
हिमालयन हेरिटेज कल्चरल एकेडेमी बोष्टनमामै श्याम लगायत रञ्जन बुढाथोकी, सुरेश बाग्ले, दिपेश श्रेष्ठ, रन्जित कोइराला र नन्दु शकंर ले खोलेको पाठशाला हो, जहाँ उनी सारंगी बजाउन सिकाउँछन् । नेपाली तथा बिदेशी बच्चाबच्चीहरु सिक्न आउँछन् । युवाहरु आउँछन् । विदेशीहरु त झन् छक्कै पर्छन् ।
५ पुस्तादेखि श्यामको परिवार संगीतमा छ । उनका बुवा रामशरण नेपाली त झन् चर्चितै छन् । श्याम संगीतकै वातावरणमा जन्मिए, हुर्किए । उनका हजुरबुवा मगर गाइने गन्धर्वले बजाएको वाद्ययन्त्र त फ्रान्सको चर्चित संग्रहालयमा भेटिन्छ । १५ वर्षको उमेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्यामले पहिलोपटक सांगीतिक प्रस्तुति दिए । विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम पहिलो त्यो नै भएपछि स्कुलमा कैयौंपटक सांगीतिक प्रस्तुति दिन भ्याइसकेका थिए।
सुरुवाह ब्यान्ड पहिलो सांगीतिक समूह थियो श्यामको । जहाँ उनका ४ जना साथी आवद्ध थिए । यही ब्यान्ड लिएर जापान पुगे । श्याम भन्छन्, ‘विदेशमा मेरो सांगीतिक यात्रा त्यो नै पहिलो थियो, जापानमा हामीले अस्पतालका बिरामीलाई संगीत थेरापी दिएका थियौं ।’ पछि श्यामले सुकर्म ब्यान्ड १९९७ मा स्थापना गरेका थिए। जसमा दु्रबेश रेग्मी,प्रमोद उपाध्याय को सहभागीता रहेको थियो । नेपालमै पनि सांगीतिक यात्रा थुप्रै गरे । त्यो यात्राको आम्दानी अनाथहरुका लागि सुम्पन्थे श्याम । सुकर्म ब्यान्डबाटै उनी सन् २०११ मा १८ वटा देशमा सांगीतिक सदभावनादूत बनेर प्रस्तुति दिन गए । त्यही योगदान स्वरुप उनी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट सम्मानित समेत भए । विदेशमा मात्रै नभई स्वदेशमा पनि शान्तिका लागि सुकर्म यात्रा ग¥यौं, श्याम सम्झन्छन्, ‘पोखराको बाटुलेचौरका गन्धर्व बच्चाहरुलाई पढ्नु पनि पर्छ, संगीत पनि सिक्नुपर्छ भनेर हौसला दियौं। अहिले पोखरामा चिनिएको लक्ष्य ब्यान्ड श्यामहरुले गरेको सत्कर्मको प्रतिफल हो ।
नेवारी बाजासँग पनि साइनो छ । रुद्र भन्ने ब्यान्ड बनाएर युरोप यात्रा पनि श्यामले गरे । जसमा रमन महर्जन, बाबुराजा महर्जन, बिश्व नेपाली को सहभागीता रहेको थियो । बाँसुरी, सारंगी र नेवारी बाजाको प्रवद्र्धन युरोपका थुप्रै देशमा गरे । श्यामका दाइ पूर्ण नेपाली सारंगी बनाउँछन् । देशविदेशका थुप्रै ठाउँबाट आउँछ सारंगीको डिमान्ड। श्याम पनि दाइका सारंगी देश विदेश पु¥याउन कोअर्डिनेट गर्छन् । भाइ किरण नेपाली बिपुल क्षेत्रसँग सारंगीको धुन भर्दै सहयात्रा गर्छन् । छोरा प्रिन्स पनि विपुलसँगै हुन्छन् बेलाबखत ।
सन् २०१४ मा अमेरिका आए श्याम । यहाँका गुरुङ समुदायका कार्यक्रममा सारंगी बजाए । तामाङ समुदायका कार्यक्रममा सारंगी बजाए । अरु थुप्रै कन्सर्टमा सुनिन्छ उनको सारंगी धुन । विसं २०७२ को भूकम्पका बेला नेपालमा थुप्रै डलर पैसा पनि श्यामले कन्सर्ट गरेरै पठाए । भन्छन्, ‘संगीत भनेको मनोरञ्जनमात्रै होइन, शिक्षा पनि ।
अमेरिकामा भएको हिमालयन हेरिटेज श्यामले सुरु गर्दा ३ जना बच्चा थिए । अहिले ५० जनाभन्दा बेसी छन् । ती नेपालीमात्रै होइनन्, अरु देशका पनि छन् । अनलाइनबाट बेलायतका एक्सआर्मीहरु श्यामसँगै संगीत सिक्छन् । कोही जापानका पनि छन्, अनलाइनबाट सारंगी सिक्ने ।
संगीतमा ठूलो शक्ति हुन्छ । हो नि । थुप्रै बिरामीको उपचार संगीतले गर्छ । श्यामले त्यो शक्तिले थुप्रैलाई आनन्द दिएका छन् । संगीतको शक्तिका बारे नर्बे, स्वीडेनमा भएको गोष्ठीमा भाग लिए । विभिन्न कलेजमा पनि थुप्रै कार्यशालामा भाग लिन्छन् । नेपाली संगीतकाबारेमा बताउँछन् । त्यस्तो कार्यशाला विश्वविद्यालयहरुमा पनि हुन्छ।
बिश्वमा नै कहलिएको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा श्यामले सारंगी तथा नेपाली संगीतको बारेमा बेलाबेलामा बिदेशी बिद्यार्थी तथा प्रध्यापकहरुलाई अध्यापन पनि गराउछन् । यो भन्दा ठुलो गर्ब गर्ने लायक र नेपाली लोक सङ्गितमा के हुन सक्छ र ?
पनि श्यामले नेपाली संगीतको बारेमा त्यहाँका प्राध्यापकहरुलाई जानकारी दिन भ्याइसकेका छन् । ती हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले एउटा वृत्तचित्र नै बनाउँदैछ र त्यसमा श्याम समेटिँदैछन् । क्रसकन्ट्री संगीतका फाइदाहरुबारे प्राध्यापकहरु केन्द्रित हुँदैछन् ।
श्यामले संगीतका ४५ कीर्ति दिइसके । त्यसभन्दा धेरै उनका कार्यक्रम देशदेशावरमा भए । श्याम त चिनिए नै सारंगी चिनियो र नेपाल पनि चिनियो । यो उनकोमात्रै होइन, नेपालकै उपलब्धि पनि हो । जीवनमा सन्तोष र आनन्द लाग्ने कुरा यही छ उनलाई । नेपालमा एउटा फिल्म बनेको थियो, सारंगी । त्यसको एउटा गीतले भनेजस्तो यो उपलब्धि र सन्तोषकै कारण श्यामको मन पनि नाच्छ छम, छम छम । जस्तो कि त्यो फिल्मको गीतमा भनिएको थियो— सारंगीको धुनले, भन्छ मेरो मनले आज नाचिदेऊ, छम छम छम…..।